Indlela kabusha le izithombo utamatisi, ngakho wakhula ibe nempilo, inala yesivuno - enye yezinkinga eziyinhloko balimi imfundamakhwela. Growing utamatisi kusuka imbewu bebodwa, kufanele bazazi iphuzu elilodwa ebalulekile ekukhuleni - Swordplay izithombo, ngamanye amazwi, Lithatha amagciwane ku isitsha emikhulu equkethe bomhlaba bube busha.
Ngesikhathi esihle zokutshala
Lapho zitshala izithombo zakho ehlabathini? Ukuze inqubo kancane okubuhlungu izithombo zidluliselwa ngendlela efanele usaqala ukukhula, uma kakade usezuze amahlamvu ezimbili noma ezintathu yeqiniso. Umhlabathi esisha isikhala esanele sokuthuthukiswa oqinile uhlelo impande izithombo, okuyinto into ebalulekile ukukhula enempilo isiko kanye ezithela luningi.
Lapho kukhona isidingo ukukha?
Kwezinye izimo, ukuthuthukisa ukukhula kwezitshalo, ukuphunyuka ezifweni noma, Ngakolunye uhlangothi, ngokweqile asebenzayo ukukhula okusithiyayo kungase kudingeke transplanting. Indlela kabusha izithombo utamatisi, futhi ngaphansi kwaziphi izimo?
Ukufakelwa amahlumela ngamunye ebhodweni ivulekile kufanele kube ukuqinisekisa ukuthi uhlelo impande isibe eqinile futhi uzinzile.
Uma imbewu yatshalwa hhayi izimbiza ahlukene, futhi emaphaketheni jikelele, izithombo Lithatha izigubhu ngamunye uzovikela izimpande kusukela aluka futhi uyonikeza zokutshala lula ngaphezulu yindawo - endle noma abamba ukushisa.
Uma ukuhluma kwezinhlobo imbewu Kwatholakala okuningi, nge Swordplay, ungakhetha eliphezulu kakhulu futhi izithombo enempilo, futhi nokujikijela owengeziwe.
Uma izitshalo kukhona ogulayo, Swordplay ungagcina namanje amahlumela isetshenzwe ezifweni fungal, okungase aqukethe amagciwane emhlabathini.
Ukubambezela ukukhula izithombo ukucwila emanzini ngokuphelele futhi omdala yisithombo, lokhu kwenzeka, uma kukhona ingozi yaso ukuphambana. Endabeni ukufakelwa zalesi sihlahla zingase zithathe isikhathi kancane ekuthuthukisweni.
Indlela kabusha izithombo utamatisi: kanjani
Ukuqalisa ngamapiki izithombo ngezindlela ezimbili:
1. ngu zitshala. Ngemva kwamahora ambalwa ngaphambi izitshalo Pick ngobuningi bazithela nge ekamelweni lokushisa lamanzi ukuze izitshalo ekhishwe kalula kusukela imbiza. umthamo Esikhulu Ngokwengeziwe ukufakelwa ukulungiselela, ukugcwalisa ¾ kwenhlabathi lelungiselelwe, futhi uphawu kancane ke. Umhlabathi siphelile okudingeka ukwenze izimbobo ezincane nenkundla utshalwe yisithombo impande obuphelele. Ikhipha ebhodweni Igumbi zobumba ne izithombo, udinga ukhulule izimpande umhlaba ngokweqile, ukubeka igciwane emgodini futhi wambozwa umhlaba, kancane aba ngayo iminwe yakho emhlabeni izithombo. Ngemva zitshala izitshalo kudingeka uthele futhi endaweni Ukufiphaza indawo izinsukwana.
2. ngu yokusingatha. Izinzuzo le ndlela wukuthi izitshalo izimpande at Swordplay cishe kungathintekanga, emva ukufakelwa izitshalo akudingeki isikhathi ukujwayela, zikhula ngokushesha, ngaphandle ingasheshi ijubane. Indlela kabusha izithombo utamatisi kule ndlela ngamapiki? Ezinsukwini ezimbalwa nje ngaphambi ukufakelwa Kufanele uyeke ukuchelela Igumbi zobumba ne izithombo kuthathwe ngokukhululekile uvela imbiza noma inkomishi. Lungiselela obunamandla kufanele ayigcwalisa ngomhlabathi by 1/3 ke iziqukathi encane nge izithombo kuthiwa ibheke phansi, ubambe ingxenye phansi simila phakathi kweminwe, kanjalo izithombo nge clod we umhlaba uyoba entendeni. Izitshalo nge utshalwe ebhodweni entsha. Lezi zokukhwabanisa kwenziwa yini wonke amahlumela voids ke kwakhiwa zigcwele inhlabathi, ngobuningi bazithela, futhi isitsha isiko ibekwa isikhundla Ukufiphaza.
Lapho zitshala izithombo kule abamba ukushisa?
Ukulungele kabusha izithombo kufanele ibe uqweqwe stem futhi flower efihlekile, ukuphakama elikhulu okuyinto incike grade yena fanele. Futhi, izithombo kufanele kube amaqabunga amakhulu kanye nezimpande eziqinile. Inkathi ukufika utamatisi e greenhouse incike sezulu. Ukutshala izithombo ngaphansi kwezimo ezikahle endaweni phansi evikelwe kungenzeka ekupheleni kuka-Ephreli. Esimweni esingalindelekile frost abamba ukushisa kube camera enezingxenye ezengeziwe wefilimu.
Ngaphambi zitshala izithombo emhlabathini ngomumo hole ngamunye ukulungele Kumele wengeze 1 tbsp. isipuni esigcwele superphosphate uthele kahle egcwele amanzi, futhi ngemva ukumuncwa isitshalo egcwele ukutshala. Indawo izithombo kufanele kube kancane ephakeme ukwedlula yinhlama umhlaba ebhodweni. Lapho ukutshala utamatisi lujule futhi Spud ekuthuthukiseni bakhuthele kohlelo impande. utamatisi Utshalwe kufanele kube ngobuningi moisten ke musa zizinisele sonto kuqala. Lokhu kuzokwenza ukwandisa ukukhula izimpande kusesho umswakama kanye nezakhi. Indlela elula kabusha izithombo ababhekene ntambama. Phela manipulations ka kwezinsuku ezimbalwa, kufanele izitshalo evikelwe elangeni. Emva izithombo zithathwa impande futhi waqala ukusinika amahlamvu entsha, ungaqala ukondla umquba.
utamatisi ukufakelwa i ekhanyayo
Indlela kabusha izithombo utamatisi emhlabathini? Ukuze wenze lokhu, kudingeka wazi izinto ezimbalwa:
1. Isimo ebaluleke kakhulu ekukhuleni kwesihlahla nasekuvezeni okunempilo bese ukuthela ocebile ukhetha kahle isayithi kokwehla endaweni. Utamatisi ekukhuleni enempilo kudingeka semali kwelanga, ngakho udinga ukukhetha indawo elungile.
2. ukuthambisa kufanele kwenziwe kabili ngesonto, ngombandela wokuthi umswakama inhlabathi kanye angazamukela zisebenzisa amanzi amaningi ngokushesha. Utamatisi like a lot umswakama, ngakho kufanele uyophuziswa ngobuningi.
3. Bambalwa ukwazi indlela kabusha izithombo utamatisi, odinga ukukwazi zalisa kubo nini futhi kanjani. Izithako Organic nokumbiwa ziye zasetshenziswa kwesikhathi ukukhula ekuqaleni, kulandelwa isikhathi ukulinda ngaphambi ukuthola ezikhiqiza amaqanda ngaleso utamatisi asehlathini.
4. Ukulungiselela kwenhlabathi - njengoba iphuzu elibalulekile. Ukuze kabusha utamatisi Turf emhlabathini, humus kanye Peat kuyizinto ezifanele kakhulu. Ephambi kwezinduna loamy inhlabathi kusayithi kungenzeka ukwengeza isihlabathi.
Nge ekukhuleni utamatisi kubalulekile njalo athambise umhlabathi, ukuze umswakama nomoya-mpilo ukuze izimpande wathola kalula, ikakhulukazi, lokhu kuyiqiniso emva kwezimvula, lapho uqweqwe bangase bafinyelele emhlabathini.
Indlela babhale indaba ekhuluma ubungani: izibonelo, amathiphu namasu